बिकासको लाडो देख्दा कस्तो भयो | Kamsastra
Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, बिकासको लाडो देख्दा कस्तो भयो, मलाई लोग्ने होइन,
एउटै गाउँ भएपनि विकाशको र मेरो घर अलि टाढै पर्थ्यो । निक्कै दिन भएको थियो हाम्रो भेट नभएको । विकाशले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएदेखि मेरो भुईँमा खुट्टानै थिएन । मन पनि सिमलको फूल जस्तो ( भुवा हो हुनत फूल भन्छौ हामी ) हलुँगो भएको थियो । त्यसै नाचुँ नाचुँ जस्तो लाग्थ्यो । विकाशलाई भेट्न जान मन लागिरहेको थियो त्यसैले धेरै अगाडी देखि म संग रहेको विकाशको कापी पुर्याउन जाने बहाना बनाएर जाने विचार गरें र ऐना अगाडी बसेर सिँगारिन थालें । मलाई सिँगार गर्नै पर्ने त थिएन तर पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छे संग जाँदा अलि राम्री हुन मनलागेको थियो । अनुहारको सिँगार पटार सकेर म ऐनामा हेर्दै आफ्नो स्तन खेलाउन थालिसकेछु । म किन यस्ती बहुलाई भएकि ? आफैं छक्क पर्छु । सायद मेरो प्रकृती नै यस्तो हो कि ? अलिकती फुर्सद पाएंभने म किन यौनाङ्गहरु खेलाउंछु ? विकाशले भनेझैं म उम्लिएर पोखिन बेर छैन ।
विकाशको कुराको सम्झनाले सम्हालिएर म विकाशको घर गएं । सुनसान थियो घर । सायद कोहि थिएनन । म फर्कन लाग्दै गर्दा विकाशकि दिदीले बोलाउनु भयो , ‘ अरे सानी ? किन आकि थ्यौ ? फेरी फर्कन लाग्यौ त ? ‘
Labels: Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, बिकासको लाडो देख्दा कस्तो भयो, मलाई लोग्ने होइन